ဂျုံမှုန့် ၂ ဇွန်း စားပွဲဇွန်း
ဘေကင်ပေါင်ဒါ ၁ ဇွန်း ခွဲ လက်ဖက်ဇွန်း
သကြား ၁ ဇွန်းလက်ဖက်ဇွန်း
ပွတ်ပွတ်ဆူရေ ၁ ခွက်
ပြောင်းဖူးမှုန့် ၁ ခွက်
နွားနို့ ၁/၄ ခွက်
ပြောင်းဖူး တစ်ဝက် ခွက် (ချွေပြီးသား)
Kernel corn ½ cup
ကြက်ဥ ၁ လုံး (ခလောက်ထားပါ)
Egg 1 no (beaten)
ကြက်သွန်ဖြူမြိတ် ၁ ဇွန်း စားပွဲဇွန်း (သေးသေးလေးညပ်ထားပါ)
Chives 1 tbsp (snipped)
ကာနိုလာဆီ ၃ ဇွန်း စားပွဲဇွန်း
Cook canola oil3tbsp
ခရင် ၁/၃ ခွက်
၁။ ဖန်ဇလုံထဲ ဂျုံ၊ ဘေကင်ပေါင်ဒါ၊ သကြား၊ဆား ရောပြီး ခဏဘေးဖယ်ထားပါ။
1.In glass bowl combine flour, baking powder, sugar, salt and set aside.
၂။ ဖန်ဇလုံ ထဲ ရေပွတ်ဆူ နှင့် ပြောင်းဖူးမှုန့်များရောမွှေပါ။ နွားနို့ထည့်ပြီး ချောမွေ့သည်အထိမွှေပါ။ ပြောင်းဖူးစေ့၊ ကြက်ဥ၊ ကြက်သွန်ဖြူမြိတ်များ ထည့်ပြီး သေချာ ရောအောင်မွှေပါ။ ပြီး လျင် ဂျုံရောများ ထည့်ပြီး နှစ်ခု အသေချာ ရောအောင် မွှေပါ။
2.In glass bowl stir boiling water into cornmeal to make stiff much. Stir in milk until smooth. Stir in corn, egg, and the chives. Add flour mixture to cornmeal mixture and stir just until combined.
၃။ အကြော်အိုးထဲ ဆီထည့်ပြီး မီးအနေတော်ဖြင့် အပူပေးပါ။ အိုးအလဲလောက်ကို ဇွန်းခွက် ဖြင့် တစ်ဝက်ဇွန်းလောက် ၀ိုင်းဝိုင်းလေး ချပြီး ကြော်ပါ။ ၆ ခု လောက်လုပ်လို့ရပါတယ်။ ရွှေရောင်သန်း လာလျင် တစ်ဘက်လှန်ပေးပါ။ နှစ်ဖက်လုံး ရွှေရောင်သန်းလာလျင် ၇ပါပြီး။
3. Inalarge skillet heat oil over medium heat. Drop half of the battery by rounded tablespoon into hot oil, making6cakes. Cook until golden brown, turning once.
၄။ ကြိုက်နှစ်သက်လျင် ပြောင်းဖူးကိတ်ပေါ် ခရင်များတင်ပြီး သုံးဆောင်လို့ရပါတယ်။
4. If desired serve with sour cream.